Lalàna vaovao momba ny hetra : manamora ny fanambarana ataon’ireo mpandraharaha | NewsMada
Lalàna vaovao momba ny hetra : manamora ny fanambarana ataon’ireo mpandraharaha
Nitondra fanazavana tamin’ireo mpandraharaha madinika sy vaventy, omaly tao amin’ny Antenimieran’ny varotra, ny sampandraharahan’ny hetra foibe, nampahafantatra azy ireo bebe kokoa ny lalàna momba ny hetra sy ny antsipiriany tsara ho fantatra.
Nambaran’ny tale jeneralin’ny hetra, Razafindrakoto Garisse, fa azon’ny rehetra jerena izany antsipirian-dalàna izany, ny amin’izay hetra tokony haloa mifanaraka amin’ny asa atao. Tena nitondrana fanazavana tamin’ireo mpandraharaha ireo ny momba ny fikirakirana ny lalàna sy ny fifanolanana eo amin’ny hetra. « Raha ny fiaraha-nidinika tamin’ireo mpandraharaha madinika, tsy olana ho azy ireo ny lalàna vaovao 2017 momba ny hetra fa efa nisy taloha ny hetaheta noho ny fahasarotana amin’ny fanaovana fanambarana hahafantarana ny vola tokony haloa », hoy ny tale jeneraly, Razafindrakoto Garisse.
« Manomboka izao, nampiana dingana telo ny fandrafetana ny hetra raha roa izany teo aloha, izany hoe, manamora sy manamaivana kokoa ny fanambarana ataon’ireo mpandraharaha », hoy ny tale jeneraly. Na sarotra ho an’ny Malagasy aza ny mandoa izany vola izany, efa hitan’ny ao amin’ny sampandraharaha foibe fa misy ny fivoarana raha jerena ny taona 2016, betsaka ny niditra ao amin’ny kitapombolam-panjakana.
TVA amin’ny “groupe” vao hovidina ?
« Nihena ny fanenjehana ireo tsy mpandoa hetra, nefa nihoatra tamin’ny niheverana azy ny vola niditra, ny taona 2016. Izany hoe, efa betsaka izany izao ny mandoa hetra an-kitsim-po », hoy ihany ny tale jeneraly. Manoloana izao delestazy lava izao, misy ny vondron’ireo mpandraharaha, mangataka ny hanesorana ny TVA amin’ny “groupe” vao hovidina, hoentina mamatsy herinaratra.
Nomarihin’ny ao amin’io sampandraharaham-panjakana io koa ny fitombon’ny faharisihan’ny olona mandoa hetran-trano sy tany any amin’ny kaominina. Toy ny lalàna rehetra, misy ny sazy ho an’izay minia tsy mandoa izany na tratra aoriana ny fandoavana azy. Olana anefa, tsy hitan’ny olona loatra ny tambin’ny fandoavan-ketra, indrindra eo anivon’ny kaominina, tanàn-dehibe na ambanivohitra. Ohatra mibaribary, zara raha misy ny jiro sy rano, ratsy ny lalana, misavovona ny fako.